Badmareeno ka tirsan Hawlgalka Atalanta ayaa la qaybasaday khibrad shaqo ciidamadda ilaalada xeebaha ee Jabuuti | Eunavfor
Badmareeno ka tirsan Hawlgalka Atalanta ayaa la qaybasaday khibrad shaqo ciidamadda ilaalada xeebaha ee Jabuuti
19kii bishi April 2016 ka xubno ka tirsan ciidamadda ilaalada xeebaha ee Jabuuti ayaa lagu martigaliyay markabka sidda calanka Hawlgalka Atalanta ee loo yaqan FGS Bayern. Si ay uga qayb qaatan tababarro xirfadeed oo xagga badda ah.
17 kii xubnood ee ka tirsana ciidamadda ilaalada xeebaha waxaa ay tababar maalin socaday ay la qaaten badmareenada Jarmalka ah ee FGS Bayern la socday. Waxaa ay ka fai’daysten xirfado qiimo leh oo ay ka mid yihin sida loo daaweeyo qof buka marka la saran yahay badda, habka loo fuulo markabka ee xarkaha loo daaadsado,habka loo isticmaalo radiyaha iyo waliba sida daayactir logu sameeyo injiinka markabka.
Taliyaha ciidanka FGS Bayern mudane Markus Bruggemeir ayaa ku so dhaweeyay gurada markabkiisa xubno ka tirsan ciidamadda ilaalada xeebaha Jabuuti. Isaga oo ku faraxsan sida guusha leh ee ay booqashadii isu dhacday. Xatta Isfahan waagi ka yimid xagga luuqada ma u noqon mid ishortaaga kala fa’idaysigii. Wayo ciidanka FGS Bayern waxaa u suurtowday in ay u gudbiyan xirfado badan – ciidamadda ilaalada xeebaha ee Jabuuti si weyn ayay ugu boogen.
Dhacdooyinka noocan ah waxaa ay ka caawiyan gobolka kor u qaadida hay’adaha ku hawlan awoodaha badda. Sidi ay uga difaaci lahaayen biyoohooga iyo waliba sidi ay badmareenada uga badbaadiyan weerarada burcad badeedka.
Read more at: https://eunavfor.eu/badmareeno-ka-tirsan-hawlgalka-atalanta-ayaa-la-qaybasaday-khibrad-shaqo-ciidamadda-ilaalada-xeebaha-ee-jabuuti/
Badmareeno ka tirsan Hawlgalka Atalanta oo tababar u gudbiyay ciidamada ilaalada xeebaha ee Somaliland
Badmareeno Talyaani ah oo ka tirsan Hawlgalka Atalanta oo la qaatay waqti farxadleh da’yarta dugsiga Jabuuti.